Dhulgariir maanta mar kale ku dhuftay jasiiradda Lombok,Indonesia. – Radio Muqdisho
Dhulgariir maanta mar kale ku dhuftay jasiiradda Lombok,Indonesia.
Dhulgariir xoog leh ayaa ku dhuftay jasiiradda Lombok ee Indonesia maanta Khamiista, taasoo keentay Dhimasho khasaaro iyo burbur xoog leh oo u geystay.
dhul gariirka ayaa ka horey Axadii 6.2 kaasoo ku dilay ugu yaraan 131 qof, ay ku dhaawacmeen dad fara badan iyo 156,000 qof oo ka bara kacey gurhayooda.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay ka soo xigatay iyada dhulgarihii ugu danbeeyay uu dadka u soo baxeen wadooyinka iyagoo argagagaxsan kasoo sababay dhismayaal burburay.
Dhul-gariir cusub ayaa ku dhuftey magaalada Lombok ee Indonesia sababay ah geerida dhimashada dadka ee ugu sarreeya 300
Dhul-gariirkii ugu dambeeyay ee 6.2 ayaa lagu soo waramayaa in uu burburay dhismayaasha iyada wali baadi goob loogu jiro haraagii burburkii dhimashadi iyo khasaarihii dhulgariirkii Axada ka dhacay Jasiiradaasi.
Mas’uuliyiinta iyo Samatabiyal dalkaasi ayaa ku dadaalaya inay cunto, biyo nadiif ah iyo gargaar caafimaad u helaan 156,000 oo Bur-buray guryahooda.
Dhulgariir baaxadiisa oo 6.2 ah ayaa axadii ku dhuftay jasiiradda Lombok Indonesia.maanta khamiista ah ayaa, wax ka yar todobaad kadib markii 6.9 o durbadiiba la rumaysan yahay in ay ku dhinteen inka badan 300 oo qof.
Dhulgariirkii hada ayaa ku dhuftey maanta dadka daggan xaafadaha jasiiradaasi ayau baxsadeen dhanka waddooyinka. Sida laga soo xigtay wargayska wakaaladda meteorology ee Indonesia, degaanka dhulgariirku wuxuu ahaa lix kiiloomitir waqooyi-galbeed oo jasiiradda ah oo qotey bohol dhirerkeeda 12 mitir.
Tirada geerida dhulgariirki axadda ayaa kor u kacay 347, sida ay wakaalada wararka ee Antara ay sheegtay. Hay’ad kale oo dalka Indonesia ah ayaa dhigtay tirada 381. Tirada kuwii dhintey ayaa wali kor u kacaya, iyada oo samatabbixiyeyaashu ay u shaqeeyaan dadka xorta ah ee ku xayirmay burburka.
Waxaa lagu qiyaasey in 156,000 oo qof ay ku barakaceen guryahooda tan iyo dhulgarirkii ku dhuftay jasiiradda Indoneeriya habeenkii axadda, isla markaana waxaa la dejiyey meel baqaaro teendhooyin Adag sidookalae la filayo barakacayaal kale o cusub in ay ku soo biiraan.
Tirada dhimashada ee dhulgariirka Axadda ayaa wali kor u kacaya oo aan caddayn. Saraakiisha iyo ururrada ay ka mid yihiin milatariga, guddoomiyaha gobolka oo ay ku jiraan Lombok, hay’adda baaritaanka iyo samatabbixinta qaran iyo diiwaangalinta waqooyiga Lombok ayaa soo bandhigtay dhimashada dhimashada kala duwan, oo u dhaxaysa 226 ilaa 381.
Hay’adda Masiibada Qaran Indonisiya ayaa maanta ku dhawaaqday in dhimashada in ka badan 164 iyada oo ugu yaraan 1,400 qof ay si xun u dhaawacmeen iyo 156,000 oo barokacay.
Nin lagu ganaaxay xawaaraha wadida gaari